काठमाडौ : अहिले सर्वत्र चासोको विषय एउटै बनेको छ को’रानाको नयाँ प्रका। बढ्दो संक्रबमित संख्या, अस्पतालमा बेडको हा’हाकार, अ’क्सिजन र स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी।
यो अवस्था आज अकस्मात आइपुगेको होइन एक वर्षअघिदेखि को’राना बाजा बजाएर हाम्रो आसपास नाचिरहेको थियो। समयक्रमसँगै खोप बन्यो, सं’क्रमित अहिले सर्वत्र चासोको विषय एउटै बनेको छ, को’रानाको नयाँ प्रका।,
बढ्दो संक्र’मित संख्या, अस्पतालमा बेडको हाहा’कार, अक्सि’जन र स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी। यो अवस्था आज अकस्मात आइपुगेको होइन, एक वर्षअघिदेखि को’राना बाजा बजाएर हाम्रो आसपास नाचिरहेको थियो। समयक्रमसँगै खोप बन्यो, सं’क्रमित संख्या धेरै प्रकाशमा आएनन् र सबैजना सहज जीवनयापनमा साविक झैं व्यवहार गर्न थाले।
जुलुस, सभा, मेला, धा’र्मिक कार्य, सामाजिक पर्व देख्दा यस्तो लाग्यो अब कोराना त मासिइसक्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एउटा सम्मेलनमा भनेको भाषण अहिले भाइरल छ। जसमा भनिएको छ,
‘भारतले गरेको को’रोनाको सफल व्यवस्थापन विश्वकै लागि अनुकरणीय छ। हाल भारतको स्थिति के छ, सर्ववि’दितै छ। राम्रो हुनु र राम्रो देखाइनु फरक कुरा हुन्। वास्तवमा स्वास्थ्य प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको होइन, उ’दांगो भएको हो। अ’क्सिजन लगाएर सडकमा बसेकी वृ’द्धा, एम्बुलेन्स ट्याक्सीमा पालो
कु’र्दाकुर्दै प्राण त्यागेका बि’रामी, आफन्त बचाउन याचना गरिरहेका आफन्त, यी सबैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीको रूप देखाउँछन्। नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै उन्मुख छ। भारतका जस्ता दृश्य र तथ्यांकहरू अब हाम्रा समाचारमा पनि दिनहुँ बढिरहेका छन्। एक वर्षअघि अमेरिकामा को’रोना संख्या उच्च हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भनेका थिए
‘न्यूयो’र्कले त सम्हाल्न सकेन भने हाम्रो त स्रोत साधन झनै कमी छ।’ त्यो अन्तर्वार्ता धेरैले सुने कि सुनेनन्, हामीसँग सिक्ने समय चाहिँ धेरै थियो। के कति सिकियो र स्वास्थ्य प्रणालीमा कति सुधार भयो? आमजनतामा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्तिले सातो गएको छ, ‘अस्पतालमा अब बेड दिन नसकिने भएको छ।
सरकारले हात उठायो भनेर आतं’कित मानिसहरू घरमा अ’क्सिजन सिलिन्डर थुपा’र्न थालिसके। हामीसँग स्रोत र साधन छैन, कसरी भन्न सक्छौं? मेरो करिअरको सुरू’आती दिनमा डा. जागेश्वर गौतमसँग काम गर्ने संयोग जुरेको थियो। जब चितवनमा भाइ’रल ज्व’रो फैलि’न्थ्यो, उहाँ आफैं आराम गर्ने रूममा बि’रामी भर्ना गर्न बा’ध्य हुन्थ्यौं।
कुरुवा बस्ने बेन्चमा बि’रामी राख्थ्यौं। झ्यालका डन्डीमा झुन्ड्या’एर भए पनि बिरा’मीलाई सलाइन चढाउँथ्यौं।
श’ल्य’क्रिया गरेका बिरामी छिटो डि’स्चार्ज गरेर भए पनि नयाँ सि’किस्त बि’रामीलाई लिन्थ्यौं। अस्पताल आइसकेको बिरामी ‘फर्काउन हुन्न भन्ने मान्यताका साथ सबैले काम गर्थ्यौं।
अझ भरतपुर सरकारी अस्पतालमा बेड बाहेक म्या’ट्रेसमा पनि उत्तिकै संख्यामा, बालरोगमा तथा अन्य विभागमा पनि बिरामी हुन्थे। श’क्य’क्रिया कक्षमा अनगन्ती श’ल्यक्रि’या गरिसके पनि नमूना औषधि, सामग्री, प्रयोग गरेरै पनि अति विपन्न बिरामीको ह’ड्डी जोडिरहनुहुन्थ्यो डाक्टरहरू।
छ घन्टाको ड्युटीमा २४/२५ वटा सिजरियन भए पनि कसैलाई फिर्ता पठाउने अवधारणा त्यहाँ हुन्थेन। सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सेवा दिइरहेका हुन्थ्यौं। सं’क्रामक रोग, एचआ’इभी, हेपा’टाइटिस, सीमित पिपिई प्रयोग गरेर सेवा दिँदा हुने जो’खिम त्यो बेला पनि स्वा’स्थ्यकर्मीले सामना गर्थे।
त्यसयता करिब १२/१३ वर्ष बितिसकेको छ। देशले जनआ’न्दोलन, ग’णतन्त्र, भुइँचा’लो, संघी’यता, ना’काबन्दी, विभिन्न दलका सरकार देखिसकेको छ। देशका अरू समस्या त छँदै छन्। केही सुधार भए होलान्, केही राम्रा प्रतिवेदन बन्ने काम, केही सुधारिएका तथ्यांक पनि बने होलान् तर नर्सिङ क्षेत्रको हालत उही नै रह्यो। -इ न्युज बाट
२०७८ बैशाख २४, शुक्रबार १७:३९ गते 1 Minute 606 Views